Kedu ka anụmanụ si emetụta ma chebe onwe ha pụọ ​​na okpomọkụ? | Netwọk Mgbasa Ozi
N’elu ọnụ ụzọ okpomọkụ ụfọdụ, ihe ndị dị ndụ na-esiri ya ike ịrụ ọrụ. Ndị ọkachamara si WWF (World Wide Fund for Nature) dọrọ aka na ntị nke a, ha nwekwara ike ịnwụ. Oké okpomọkụ nke na-emetụta ndị mmadụ nke ukwuu, na-emetụtakwa ụmụ anụmanụ. Dabere n'ụdị na ụdị ọ bụ, mgbanwe na-amalite ịchọpụta. Anyị nwere ike ịchọta site na mbelata nke mmepụta anụ ụlọ na mbelata ọnụọgụ nke ụdị kachasị emetụta.
Ọ na-emetụtakwa osisi, oke okpomọkụ, yana obere mmiri ozuzo na-eso, na-akpata, dịka ọmụmaatụ, okooko osisi iji kpọnwụọ. Aụ enweghị ike ịmịpụta mmiri dị ukwuu. N'oge dị ka nke a, mmepụta a na-ada. N'ime awa ndị mbụ nke ụbọchị, ha nwere ike ịrara onwe ha nye n'ịchịkọta nectar. Mgbe nke ahụ gasịrị, ha kwesịrị ịhapụ ya, iji mee ka mmiri kpoo ụlọ ahụ ma debe ya n'etiti 32-35ºC.
1 Kedu ka o si emetụta nnụnnụ?
2 Olee otú ha si echebe onwe ha?
3 Kedu ka o si emetụta ihe na-akpụ akpụ?
4 Kedu ka o si emetụta azụ?
Kedu ka o si emetụta nnụnnụ?
Okpomoku di na oge ebe enwere mmeputara, na eme ka umu umu aka na achota o siri ike ichota mmiri. O nwere ndị na-aableụ mmanya ole na ole, na-eme ka ike na-abawanye iji chọọ mmiri ma mezie ya. Nke ahụ na-emetụta ọnụ ọgụgụ ọkụkọ na-adịgide ndụ.
A na-ahụkwa na nnụnụ ndị jikọtara na ala ahịhịa, na mmụba nke okpomọkụ, na-adịchaghị akwụkwọ ndụ. Mmeputakwa nke ụmụ nnụnụ na-ada, na ihe yiri nke nnụnụ ndị na-enweghị ahụhụ. A na-ejikọta nke ikpeazụ na ọnụ ọgụgụ okooko osisi dị.
Olee otú ha si echebe onwe ha?
N’otu aka, ụmụ nnụnụ ha na-eji sọsọ ha dika ihe ntụ oyi. Ọ bụ usoro a na-ahụkarị n'ọtụtụ ụdị. Dịka ọmụmaatụ, ndị mmadụ na-eji ntutu anyị dị ka friji na-emechi n'oge ọkọchị, nke mere na ọnọdụ okpomọkụ anaghị adị elu. N'otu aka na kensinammuo ọ na-echebe anyị pụọ na oyi na-atụ n'oge oyi.
Nnụnụ bi n’obodo mepere emepe nwere ohere ka mma ịlanarị n’obodo mepere emepe. A na-enwekarị ebe nri na mmiri na-adịkarị, dị ka ebe a na-agba mmiri. Nke ahụ na-eme ka ọ dịrị ha mfe inwe ọganihu. Goodzọ dị mma iji nyere aka belata mmetụta nke okpomọkụ na nnụnụ bụ itinye ndị na-a drinụ ma ọ bụ ite mmiri.
Ke ofụri ofụri, ụmụ anụmanụ na-eme ka okpomọkụ dị n'otu ụzọ ahụ ndị mmadụ si eme. Ha na-egbusi ọrụ ha, na-achọ ebe mgbaba na ndò, nsogbu metabolic na-ebili site na oke okpomọkụ. E nwekwara ụfọdụ, kedu nkịta, ndị na-enwe mmetụta na-ekpo ọkụ karịa ka anyị chere. N’agaghị enwe ike ọsụsọ ịjụ onwe ha, anyị nwere ike ịhụ otu ha si edina n’ala na-achọ jụụ, ebe ha na-ebe ume.
Kedu ka o si emetụta ihe na-akpụ akpụ?
N'ime ha anyị hụrụ na, site n'ihe dị ka 32ºC centigrade ọ na-emetụta ha na mmekọahụ mgbe ha na-amụpụta nwa. Nke ahụ bụ ịsị, a na-amụkarị ụmụ nwanyị. Idozi nke na-adịkarị n'etiti nwoke na nwanyị na-agbanwe.
Ha bụ anụmanụ na-ekpo ọkụ, ha enweghị ike iwepụta ọkụ nke aka ha. Dị ka ọ dị na obere okpomọkụ, mmeghachi omume ha nke metabolic na-akwụsịlata ma ọrụ ọrụ ha na-ebelata, ha na-enwe mmetụta nke okpomọkụ dị elu. N'okwu a, ihe omimi nke biochemical esiwo na nguzozi na ọrụ nke ndị na-edozi ahụ metụtara na ha, enzymes ahụ, gbanwere ma ọ bụ nwee ike belata.
Kedu ka o si emetụta azụ?
Mgbe mmiri ogo mmiri na-arị elu, ha na-agagharị na mpaghara ndị ọzọ. Azụ mmiri, bụ nke anyị na-ekwughị banyere ya, dịka ọmụmaatụ merụrụ ahụ ebe a. Search chọọ nri, ha na-agakarị ogologo ije. Ọ na-emetụtakwa ụdị uwe anụ ahụ ha na akwa ụmụ ha nwere.
N'ihe banyere azụ, ha bụ anụmanụ ndị na-ebikarị na ọnọdụ siri ike. Na ikuku ikuku ọnọdụ okpomọkụ dịgasị iche iche, mana na gburugburu mmiri ọdịiche dị iche na-adịgide adịgide. Ya mere, ụdị ọ bụla nwere "mpaghara ya." Anyị nwere ụfọdụ azụ nke nwere ike ibi na mmiri mmiri na-ekpo ọkụ nke osisi, na ndị ọzọ na mmiri dị ezigbo ọkụ. Ma mgbanwe nke okpomọkụ na mmiri ya ga-emetụta ndị bi na ya ozugbo. Ọ bụrụ na ha nwere ike ịchọta ebe mgbaba na mpaghara ọzọ, ha ga -, na ntụle, ịrị elu ọ bụla ma ọ bụ ọdịda na okpomọkụ na - eme ka ọnụ ọgụgụ ha belata site na ogo ogo kachasị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri ọkụ » Kedu ka anụmanụ si emetụta ma chebe onwe ha pụọ ​​na okpomọkụ?
Ọnọdụ okpomọkụ zuru ụwa ọnụ ga-ebili karịa 2 Celsius site na njedebe nke narị afọ
N'ime afọ iri na abụọ anyị ga-ama ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ịlụ ọgụ maka mgbanwe ihu igwe